20 Pazuva rokutanga+ revhiki Mariya Magadharini akasvika kuguva mangwanani-ngwanani, kuchine rima, uye akaona dombo ratobviswa paguva.+ 2 Naizvozvo akamhanya, akasvika kuna Simoni Petro nokune mumwe mudzidzi,+ aidiwa kwazvo naJesu, akati kwavari: “Vabvisa Ishe muguva,+ uye hatizivi kuti vamuradzika kupi.” 3 Petro+ nomumwe mudzidzi wacho vakabva vabuda, vakatanga kumhanyira kuguva. 4 Chokwadi, vaviri vacho vakatanga kumhanya pamwe chete; asi mumwe mudzidzi akamhanya kwazvo akasiya Petro uye akatanga kusvika paguva. 5 Zvino, achidongorera, akaona machira aakanga akamonerwa nawo ari pasi,+ asi haana kupinda. 6 Simoni Petro akabva asvikawo achimutevera, akapinda muguva. Akaona machira ari pasi,+ 7 uyewo jira duku rakanga riri mumusoro make risiri pamwe chete nemachira aakanga akamonerwa asi rakapetwa riri roga panzvimbo imwe. 8 Naizvozvo, panguva iyoyo, mumwe mudzidzi akanga atanga kusvika paguva akapindawo, uye akaona, akatenda. 9 Nokuti vakanga vasati vava kunzwisisa rugwaro rwokuti anofanira kumuka kubva kuvakafa.+ 10 Naizvozvo vadzidzi vakadzokera kumisha yavo. 11 Zvisinei, Mariya akaramba akamira kunze pedyo neguva, achisvimha misodzi. Paakanga achisvimha misodzi kudaro, akabva adongorera kuti atarire muguva, 12 akaona ngirozi+ mbiri dzakanga dzakapfeka zvichena dzakagara imwe kumusoro uye imwe kutsoka paiva nomutumbi waJesu. 13 Dzakati kwaari: “Iwe mukadzi, uri kusvimhirei misodzi?” Iye akati kwadziri: “Vabvisa Ishe wangu, uye handizivi kuti vamuisa kupi.” 14 Pashure pokutaura zvinhu izvi, akatendeuka, akaona Jesu akamira, asi haana kuziva kuti akanga ari Jesu.+ 15 Jesu akati kwaari: “Iwe mukadzi, uri kusvimhirei misodzi? Uri kutsvaka ani?”+ Iye, achifunga kuti akanga ari mutarisiri womunda, akati kwaari: “Changamire, kana mamubvisa, ndiudzei kwamamuisa, uye ndichamutora.” 16 Jesu akati kwaari: “Mariya!”+ Paakatendeuka, akati kwaari, muchiHebheru: “Rabhoni!”+ (zvinoreva kuti “Mudzidzisi!”) 17 Jesu akati kwaari: “Rega kundinamatira. Nokuti handisati ndakwira kuna Baba. Asi chienda kuhama dzangu+ uti kwadziri, ‘Ndiri kukwira kuna Baba+ vangu naBaba venyu uye kuna Mwari wangu+ naMwari wenyu.’”+ 18 Mariya Magadharini akaenda, akasvitsa mashoko kuvadzidzi okuti: “Ndaona Ishe!” uye kuti akanga ataura naye zvinhu izvi.+ 19 Naizvozvo, paakanga ava manheru pazuva iroro, rokutanga revhiki,+ uye, kunyange zvazvo masuo emaiva nevadzidzi akanga akakiyiwa nokuda kwokutya+ vaJudha, Jesu akauya,+ akamira pakati pavo, akati kwavari: “Rugare ngaruve nemi.”+ 20 Pashure pokutaura izvi akavaratidza maoko ake norutivi rwake.+ Vadzidzi vakabva vafara+ vachiona Ishe. 21 Naizvozvo, Jesu, akatizve kwavari: “Rugare ngaruve nemi. Ndiri kukutumaiwo+ sokutumwa kwandakaitwa naBaba.”+ 22 Pashure pokunge ataura zvinhu izvi akavafuridzira, akati kwavari: “Gamuchirai mudzimu mutsvene.+ 23 Kana mukakanganwira zvivi zvevanhu chero vapi zvavo,+ ivo vachazvikanganwirwawo; kana mukachengeta zvevanhu chero vapi zvavo, izvo zvichachengetwawo.”+ 24 Asi Tomasi,+ mumwe wevane gumi nevaviri, ainzi Mumwe Wemapatya, aisava navo pakauya Jesu. 25 Naizvozvo vamwe vadzidzi vaiti kwaari: “Taona Ishe!” Asi akati kwavari: “Kana ndikasaona pakaboorwa nezvipikiri mumaoko ake, ndopinza munwe wangu pakaboorwa nezvipikiri, ndopinza ruoko rwangu murutivi rwake,+ chokwadi handingatendi.”+ 26 Naizvozvo, mazuva masere gare gare vadzidzi vake vakanga vari mumba zvakare, uye Tomasi aiva navo. Jesu akauya, kunyange zvazvo masuo akanga akakiyiwa, uye akamira pakati pavo, akati: “Rugare ngaruve nemi.”+ 27 Zvino akati kuna Tomasi: “Isa munwe wako apa, uone maoko angu, uye pinza ruoko+ rwako murutivi rwangu, urege kuva asingatendi asi utende.” 28 Achipindura, Tomasi akati kwaari: “Ishe wangu naMwari wangu!”+ 29 Jesu akati kwaari: “Watenda here nokuti wandiona? Vanofara vasingaoni asi vachitenda.”+ 30 Chokwadi, Jesu akaitawo zvimwe zviratidzo zvizhinji pamberi pevadzidzi, zvisina kunyorwa mumupumburu uno.+ 31 Asi izvi zvakanyorwa+ kuti imi mutende kuti Jesu ndiye Kristu Mwanakomana waMwari, uye kuti, nokuda kwokutenda,+ muve noupenyu nomuzita rake.